कहिलेसम्म ब्लग गर्ने ? | Ushaft's Blog
कहिलेसम्म ब्लग गर्ने ?
केहि समाज र मानिसहरुमा अरुको अनावश्यक चियो-चासो गर्ने सोख हुन्छ। अरुले के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुँदैन, त्यो मैले भन्ने कुरा होइन, तर केहि दिक्कलाग्दा प्रतिक्रियाहरु आएपछि यो लेख्नुपरेको हो। मेरो लागि आफ्नै बारेमा बोल्न र लेख्न कत्तिपनि रमाइलो कुरो होइन, तर सानो प्रष्टिकरण चाहिएको जस्तो लागेकोले यो लेख्न लागेको हुँ। केहि समयअघि मैले “यो ट्विटर खाता छिट्टै बन्द हुँदैछ” भनेर “इच्छुक माहनुभावहरु” को निम्ति एउटा ट्विट गरेको थिएँ। केहि अनिच्छुक मित्रहरुले पनि यो विषयमा इच्छा देखाइदिनुभएकोले उहाँहरुको समेत सुविधाको निम्ति यो लेख लेखिएको हो।
छद्मनामी व्लगिङ्गका सीमानाहरु छन्
छद्मनामबाट ब्लग र सोसल मिडिया प्रयोग गर्नुका थुप्रै पक्षहरुबारे म जानकार छु- केहि फाइदा छन्, केहि घाटा। तर जे भएपनि यसका थुप्रै सीमानाहरु छन्। मैले यसप्रकार ब्लग र सोसल मिडिया चलाउन शुरु गरेको केहि निश्चित उद्देश्यहरुको निम्ति हो। ती उद्देश्यहरु पुरा भएपछि, नहुने थाहा भएपछि, वा आंशिक पुरा भएपछि यसो गर्न छाड्ने मेरो योजना थियो। यसप्रकारले सधैँ चलिरहन व्यवहारीक हुँदैन।
सबै कार्यको आफ्नो आयु हुन्छ
माथि भनेजस्तो उद्देश्य प्राप्त भयो वा भएन भनेर सिधै थाहा हुने तरीका हुँदैन। गर्दैजाँदा मान्छे आफ्नै श्रृजना र कार्यमा डुब्ने र छोड्न मन नलाग्ने पनि हुने रहेछ। मलाई कहिलेकाहिँ आफुलाई त्यस्तै भइरहेको महशुस हुन्छ। मैले यसरी ब्लग गर्न थालेको केहि वर्षहरु भइसके। मेरो उमेर परिवर्तन भइसक्यो, समय परिवर्तन भइसक्यो, केहि विषयमा म आफैँ परिवर्तन भइसकेँ। युवाको नाममा बनाइएको संगठनमा जीवनभर लाग्नु त भएन नि। त्यस्तै मैले गरिरहेको यो कार्यको केहि आयु छ, कति हो त थाहा छैन, तर मलाई “अब पुग्यो” भन्ने लागेपछि यो छोड्नुपर्छ। म आफैँलाई धेरै प्रश्नहरु सोध्नेगर्छु, तिमध्ये “am i overdoing it (के म अति त गरिरहेको छैन)?” र “is it necessary (के यो आवश्यक छ)?” भन्ने प्रमुख हुन्। यसप्रकारको कृयाकलापको दुरुपयोग वा अति-प्रयोग गर्न मुश्किल छैन, र म त्यसो गर्न चाहन्न।
मेरो पेशा ब्लगिङ् र सोसल मिडिया होइन। मेरा अरु काम, कर्तव्य र उद्देश्यहरु पनि छन्। मेरो समय र शीपको आवश्यकता कहाँ बढि छ र त्यसको प्रयोगले मैले सोचेका नतिजा र उद्देश्यहरु कहाँ प्राप्त हुन्छन् भनेर मलाई थाहा छ। सीमित समयको उपयोग र व्यवस्थापन गर्नु एक चुनौति हो। अन्य क्षेत्रमा बढि समय दिनको निम्ति मैले आफ्ना सोसल मिडिया कृयाकलापहरुका कमी ल्याउनुपर्नेछ।
कहिलेकाहिँ मलाई आफैँले गरिरहेका कामहरु मनपर्दैनन्। कहिलेकाहिँ म अनावश्यक व्यक्तिहरुसँग (मेरो निम्ति) अनावश्यक विषयहरुमा वहस गरिरहेको हुन्छु। (संदिप वडालको आपत्तिपछि सम्पादित: पहिले यो वाक्य यस्तो थियो, “कहिलेकाहिँ म अनावश्यक व्यक्तिहरुसँग अनावश्यक विषयहरुमा वहस गरिरहेको हुन्छु।”) असान्दर्भिक मानिसहरुले लेखेका कुराहरु चित्त नबुझेर प्रतिवाद गर्न समय खर्च गरिरहेको हुन्छु। सीमित स्वार्थ समूहका प्रतिनिधीहरु मानिसहरुलाई दिगभ्रमित गर्न खोजेको देखेर रिसाउँछु र मैले सकेको केहि गर्नैपर्छ भनेर सोच्छु। तर मलाई यि सबै कामहरु सँधै भित्रैबाट मनपर्दैन (कहिले मनपर्छन, कहिले पर्दैनन्)। मलाई आधुनिक र स्वतन्त्र समाज भइदिए यस्ता वहस र कार्यहरु बारे प्रशस्त उपचारहरु अन्यत्रै रहेको वारे विश्वास हुनेथियो। समाजले self-correcting व्यवस्था र तरिकाहरु अपनाएर आफैँ अघिबढ्ने थियो। तर अहिलेको प्रमुख विषय नै केहि मानिसहरु त्यस्तो व्यवस्था विकसित हुन कसरी नदिने भनेर जानीजानी रोक्ने र विथोल्ने प्रकियामा मिलेर र ठूलो शक्तिका साथ लागिपरेका छन्। त्यसैकारण उनीहरुको प्रतिवाद गर्नुपरेको हो र सबैलाई यसबारेमा सचेत बनाउनु परेको हो।
अर्को जीवनको मोह
धेरै साथीहरु र धेरै घृणागर्ने मानिसहरु दुबै कमाएको छु मैले यसरी ब्लगिङ्ग र सोसल मिडिया चलाएर। त्यसमा मलाई कुनै समस्या छैन, तर म आफुले गरिरहेको कार्यद्वारा परिभाषित हुन चाहन्न। विस्तारै विस्तारै म पनि घृणा गर्न थालौँला, दुश्मनहरु बनाउन थालौँला, आफ्ना मित्रहरुबाट पनि यस्तै समाज र राजनीतिका विषयहरुले गर्दा टाढिउँला- मलाई त्यस्तो गर्न मन छैन। यो भन्दा अलि फरक मेरो आफ्नो निजी जीवन मलाई धेरै मनपर्छ। म बरु धेरै त्यस्तै हुन चाहन्छु, यस्तो हुन कम चाहन्छु। त्यसकारण सधैँभर मलाई यस्तो भइरहन मन छैन।
माथि भनेका र अरु पनि कारणहरुले गर्दा मैले केहि समयमा यसरी सोसल मिडिया प्रयोग गर्न बन्द गर्नैपर्ने हुन्छ, र संभवत म त्यसै गर्नेछु। केहि समयमा (२-३ महिना) मा त्यसो गर्ने विचार गरेर मैले सो ट्विट गरेको हुँ।
विचार परिवर्तन कसरी भयो?
केहि मानिसहरु हुन्छन्, जसलाई आफुले सोचेको कुरामात्र ठिक लाग्छ, तीनले अरुका विचार सुन्दैनन् र लिँदैनन् पनि। तर अन्य धेरै मानिसहरुजस्तै आफ्ना मित्रहरु र अन्य व्यक्तिहरुका विचार मेरा निम्ति महत्वपूर्ण छन्। मलाई उनिहरुले केहि कारणहरु सहित सुझाव दिए कि अहिले यो एकाउण्ट बन्द नगर र केहि समय अझै प्रयोग गर। उनीहरुले मलाई कन्भिन्स गराए। त्यसो भइसकेपछि जिद्दि गरेर र घमण्डको निम्ति मात्रै आफ्नो निर्णयमा अडिरहनु मलाई राम्रो लागेन। त्यसकारण बरु कम प्रयोग गर्ने, तर उनिहरुले सुझाएजस्तै केहि समय अझै प्रयोग गर्न नछोड्ने तरिका अपनाउने विचार गरेँ।
मैले एकाउण्ट बन्दै गर्दा पनि कुनप्रकारले बन्द गर्ने भनेर सोचेको छैन। कहिलेकाहि आक्कल-झुक्कल ब्लग लेख्ने, तर दैनिक ट्विट नगर्ने हो कि, केहि पनि प्रयोग नगर्ने हो कि, वा जे हुन्छ हेर्दै जाने हो, मैले सोचिसकेको छैन। यस प्रकारको अनुभव मेरो र शायद अरुहरुको निम्ति पनि नयाँ प्रयोग भएको हुँदा कुनै निश्चित best-practices को सूची मसँग छैन। हेर्दै जाउँ, के हुन्छ। बरु केहि सुझाव-सल्लाह वा प्रश्नहरु छन् भने भन्नुहोला, मलाई खुशि लाग्नेछ छलफल गर्न।
← डरलाग्दो ध्रुविकरण
सेतोपाटीका बारेमा केहि शब्द →